Fahefana: Ny singa tsy hita ao amin'ny paikady atiny ankamaroan'ny atiny | Martech Zone
Fahefana: Ny singa tsy hita popoka amin'ny tetikady ankamaroan'ny atiny
Alatsinainy Aprily 4, 2016 Talata, Aprily 5, 2016 Douglas Karr
Tsy misy herinandro izay mitohy Martech Zone fa izahay dia tsy mitandrina sy mizara ny zava-misy, hevitra, tsonga ary ny atiny hafa aza amin'ny alàlan'ny infografika sy boky hafa.
Tsy tranokala fitsaboana ho an'ny atin'ny olon-kafa anefa izahay. Ny fizarana ny hevitry ny hafa dia tsy mahatonga anao hanana fahefana fa manaiky sy manamafy ny fahefan'ny mpanoratra izany. Saingy… ny fanatsarana, ny fanehoan-kevitra, ny fitsikerana, ny fanehoana an-tsary ary ny fanazavàna tsara ny atin'ny olon-kafa dia tsy ny fanekena sy ny fanamafisana ny fahefany fotsiny… fa ny anao koa manatsara izany
Rehefa hitako fa misy atiny an-tserasera izay sarobidy amin'ny mpihaino anay, dia manokana fotoana aho handinihana azy tsara sy hanomezana antsipiriany izay fantatro fa hankasitrahan'ny mpihaino ahy. Tsy ampy, ohatra, ny famoahana infografika noforonin'ny olon-kafa. Mila mizara an'io infografika io aho ary manome fandinihana lalina momba an'io izay miavaka sy toerana my fahaizany.
Famaritana: Ny kalitaon'ny fahatokisan'ny olona mahalala zavatra betsaka momba ny zavatra iray na hajaina na eken'ny olon-kafa.
Raha io famaritana io dia misy fepetra telo takiana amin'ny fahefana:
Expertise - ilay olona mahalala be sy mampiharihary ny fahalalana.
fahatokiana - ilay olona mino ny fahalalana rehefa mizara izany izy ireo.
fankatoavana - manam-pahaizana hafa manamarika ny fahaizana asehon'ny olona am-pahatokisana.
Ny fametrahana ny hevitry ny olon-kafa tany am-boalohany dia tsy hahatonga anao hanana fahefana velively. Na dia mety hampiseho aza fa manana fahaizana manokana ianao dia tsy manome fahitana ny fahatokisanao azy izany. Ary tsy hiteraka fankatoavana anao amin'ny namanao izany.
Zava-dehibe amin'ny fahefan'ny mpanjifa ny fahefana satria ny mpanjifa sy ny orinasa dia mitady fahaizana hanampy sy hampahafantatra azy ireo ny fanapaha-kevitr'izy ireo momba ny fividianana. Raha tsorina, raha mitanisa olon-kafa ianao dia ho hitan'ny mpividy ny loharano voalohany ho toy ny fahefana ekena - fa tsy ianao.
Ataovy ny fahefana
Raha te ho fantatra ho manam-pahefana ianao dia manaova fahefana. Tsy hanao an'izany ianao raha mijanona ao ambadiky ny hevitry ny olon-kafa. Lazao ny fomba fijerinao manokana. Hizaha toetra sy hanohana ny hevitrao amin'ny fikarohana sy antontan-taratasy. Avy eo zarao amin'ireo tranokala indostrialy mamela anao handray anjara ireo hevitra ireo. Ny mpitory rehetra dia mitady ny fomba fijery miavaka foana - mora ny sehatra.
Ny valin'ny fizarana ny fahaizanao dia izao ianao dia mira lenta amin'ireo namana mitarika ao amin'ny indostria, fa tsy ho odian-tsy jerena rehefa mijanona ao aoriany ianao. Rehefa manangana fankasitrahana ianao ary mizara am-pahatokisana ny fahaizanao, dia ho hitanao fa hatoky anao sy hokarakaraina amin'ny fomba hafa ianao. Hahafantatra anao ny namanao ary hizara ny fampiasa omenao.
Ary rehefa hita fa manam-pahefana ianao dia lasa mora kokoa ny mitaona ny fanapahan-kevitry ny fividianana.
Tags: fahefanafahatokianaMpanjanantanyfamaritana ny fahefanafahaizanynamanaofankatoavana
Inona no tena dikan'ny "Marketing Context"?